रुपन्देहीका किसान महंगोमा बोरिङ गाड्दै « Nepal Bahas
एमालेकेपी ओलीकोरोना भाइरसनेकपानेपाल प्रहरीनेपाली कांग्रेसप्रचण्डप्रहरीमहाधिवेशनशेयरबजार
रुपन्देहीका किसान महंगोमा बोरिङ गाड्दै
प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७८, सोमबार १२:३८
६ मंसिर, बुटवल । रुपन्देहीमा सिँचाइका लागि जडान भएका डिप ट्युबेल वर्षौसम्म मर्मत सम्भार हुन सकेका छैनन् । डिप ट्युबेल मर्मत नहुँदा करिब १० वर्षदेखि रुपन्देहीको भूमिगत सिँचाइ प्रभावित भएको छ ।
जलउपभोक्ता समितिलाई २०५८ सालमै हस्तान्तरण गरिएका १६९ वटा ट्युबेलमध्ये २४ वटा पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् भने ४० वटाको क्षमता खस्किएको छ ।
डिप ट्युबेल बिग्रेर मर्मत सम्भार हुन छाडेपछि रुपन्देहीका किसानले महंगोमा बोरिङ गाड्न थालेका छन् । कतिपय किसानले आफ्नै लगानीमा स्यालो ट्युबेल जडान गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले पनि अनुदानमा उपलब्ध गराएका छन् ।
रुपन्देहीमा ४० हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने उद्देश्यले २०३३ सालमा डिप ट्यूबेल ‘भूमिगत सिँचाइ’ निर्माण सुरु भएको थियो । तर, किसानको बेवास्ता र सरकारले मर्मत सम्भार नगर्दा झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँलागतको भूमिगत जल सिँचाइ अलपत्र छ । रोहिणीका किसान रामकिसुन चौधरीले डिप ट्युबेल बन्द भएपछि आफ्नै लगानीमा बोरिङ गाडेको बताए ।
‘महंगोमा बोरिङ गाडेर सिँचाइ गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ । अहिले धेरै किसानलाई डिप ट्युबेल बिग्रेकाले समस्या भएको छ’, उनले भने । विश्व बैंकको दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण अनुदानमा भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
जसअन्तर्गत १६९ वटा डिप ट्युबेल निर्माण भएका थिए । १६ वटा आफै अर्थात अटिजन सिस्टमबाट मात्र चलेको भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनकुमार नेपालले बताए ।
डिप बोरिङसहित तीनवटा विद्युत सवस्टेशन निर्माण र करिब दुई सय किलोमिटर कृषि सडकसमेत ग्राभेल भएको थियो । तर, अधिकांश सडक भत्किएका छन् भने केही अतिक्रमणमा परेका छन् ।
भूमिगत सिँचाइ रुपन्देहीका १३ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । ट्युबेल बन्द हुने र सिँचाइ क्षेत्र घट्दै जान थालेपछि तीन वर्षअघि संघीय सरकारले तीन वर्षे मर्मत योजना बनाएर १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो ।
बन्द भएका सबै ट्युबेल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त नभएको सूचना अधिकारी नेपालले बताए । ‘अहिले पनि मर्मत संभारका लागि बजेट अभाव छ । बजेट नभइकन बन्द भएका र बिग्रिएका डिप ट्युबेल मर्मत गर्न सकिँदैन’, उनले भने ।
२०३३ मा सुरू भएको आयोजना २०५४ देखि २०५८ सम्म निर्माण सम्पन्न गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको वर्ष २०५८ मै नेपाल सरकारलाई आयोजनाले डिप ट्युबेल हस्तान्तरण गरेको हो ।
निर्माण सम्पन्नपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ता समितिले हेर्छ भने मर्मत सम्भार र क्षेत्र विस्तारको काम भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन भैरहवाले गर्दै आएको छ ।
रुपन्देहीमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये सुरूमा २० हजार हेक्टर जमिनको सिँचाइ डिप ट्युबेलले भएकोमा अहिले घटेर १५ हजारमा सीमित भएको छ । भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ अन्य सिँचाइ व्यवस्थापनको तुलनामा उपयुक्त मानिन्छ । बन्द ट्युबेल लामो समय सञ्चालनमा नआउँदा किसानले सिँचाइका लागि अन्य विकल्प खोज्न थालेको सूचना अधिकारी नेपालले बताए ।
रुपन्देहीमा भूमिगत स्यालो तथा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत एक हजार ९९४ वटा स्यालो ट्युबेल पनि जडान भएका छन् । जडान गरिएका स्यालो ट्युबेलले करिब पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
जय महाकाली स्यालो ट्यूबेल जल उपभोक्ता समिति मर्चवारका राधेश्याम यादवले स्यालो ट्युबेलको प्रयोग गरी सिँचाइ गरिरहेको बताए । ३५-४० फिटको गहिराइबाट पानी निकाल्न सकिने र बिजुली नभएको ठाउँमा पनि सजिलैसँग कम खर्चमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो ट्युबेलको माग बढ्दै गएको छ ।
द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
भैंसी पालेरै महिनामा चार लाख आम्दानी
दिवा खाजा उपलब्ध भएपछि विद्यार्थी बढे
भारतीय बजारप्रतिको नेपाली मोह
लुम्बिनी विकास बैंकको लाभांश पाउन कहिलेसम्म बन्ने शेयरधनी ?
दाङबाट दुई लाखसहित ६ जुवाडे पक्राउ
सिभिल बैंकले मंसिर २४ गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्दै, ब्याज कति…
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २११ जनामा कोरोना पुष्टि
२७ कम्पनीको ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आईपीओ आउँदै, कुनको कति ?
सहिद स्मारक लिगको तेस्रो चरण : पहिलो ह्याट्रिकदेखि ५३औँ सेकेन्डमै गोल
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले साढे ३६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने
डा. शेखर कोइरालाप्रति नेता तथा कार्यकर्ताहरुको समर्थन ह्वात्तै बढ्यो
सशस्त्रको एसएसपी बढुवामा देउवाकाे अवरोध हट्यो, यसरी भयाे ११ जनाको बढुवा
एआईजी पोखरेल आईजीपीलाई थाहा नदिई सुटुक्क भारततिर
सबै क्षेत्रमा जलविद्युत् ऊर्जा पुर्याइन्छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल
सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेका ६ कम्पनी कालोसूचीमा
नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको भाउ कति छ ?
तीन दशकदेखि बन्द विमानस्थल पुनः सञ्चालनको तयारीमा
विपद् मुक्त मुलुक बनाउन राष्ट्रपतिको आह्वान
किन घट्याे देउवाको क्रेज ?
माओवादीले प्रदेशमा पदाधिकारी संख्या बढायो
इन्द्रचौकमा यात्रुको प्रतीक्षामा बसेका रिक्सा चालक